Ahụmahụ Semalt na-egosi otú e si debe ntanetị Web Data na Otu Ọchịchị Ụlọikpe
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ iwu na-akwadoghị iji wepụ data site na weebụsaịtị n'enweghị ikike doro anya nke ndị nwe saịtị ahụ, onye ikpe na-adịbeghị anya na-achị achị ma ọ bụ n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. HiQ Labs natara akwụkwọ ikpe gbasara LinkedIn n'oge na-adịbeghị anya iji gbochie ha inweta data sitere na ibe LinkedIn.
Ọ bịara dị ka ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na LinkedIn gwara ka ha nye ohere ịnweta ohere na ibe weebụ ya.hiQ jiri algọridim ya chọpụta mgbe onye ọrụ LinkedIn na-achọ ọrụ dabere na mgbanwe onye ọrụ na-eme ka ya na profaịlụ ọha mmadụ.
Algorithms na-agba ọsọ na data sitere na ibe weebụ LinkedIn. Dịka a tụrụ anya, LinkedIn enweghị mmasị na ya, a na-etinyekwa ihe ndozi iji gbochie hiQ site na nchịkọta data ọzọ - vps linux o que ?. Ewezuga ihe mgbochi ndị a na-etinye na ya, a dọrọ aka na nti iwu iwu.
Mmalite ahụ enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị iburu okwu a n'ụzọ iwu kwadoro. HiQ ga-achọ nzaghachi iwu. Ụlọ ọrụ ahụ chọrọ LinkedIn iwu ka ọ wepụ ihe mgbochi ya. HiQ choro ka usoro ntinye data ya na LinkedIn nyere iwu.
Ọ dabara maka mmalite, ọ nwetara ihe ọ chọrọ. Ikpe na-akwado nke ọma. E nyere LinkedIn iwu iji wepụ ihe niile dị iche iche na-egbochi ịdebanye aha ya (LinkedIn) ma nyefee aka na free ọrụ dịka omume a bụ iwu zuru oke. Onyeikpe ahụ ji aka ya kpebie na ihe ị chọrọ ịma bụ data nke egosipụtara maka ọha mmadụ.
Onye ikpe ahụ enyeghị onye ahụ a jụrụ iwu iwu ka ọ wepu usoro mgbochi niile na - etinye aka megide ya, mana o nyekwara iwu ka onye agbachitere kwụsị ọrụ dị otú ahụ n'ọdịnihu.
Ịmepụta data weebụ na-emeghe
Ọ bụ ezie na mkpebi ahụ ka bụ ntụziaka na-adịru nwa oge, ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ ị nụ na iwu kwadoro data weebụ na-emeghe na ohere ịnweta ozi na Intanet ka mkpebi a na-akwado na. Ọbụna ma ọ bụrụ na mkpebi ikpe ikpeazụ ga-amasị onye ahụ a kwadoro, a kwadoro eziokwu a.
Onye ikpe ahụ kwalitere iwu a site na igbochi ihe niile LinkedIn kwuru. Mgbe LinkedIn gbalịrị ime ka o doo anya na onye ahụ gbara akwụkwọ ahụ na-ezoro onwe ya, ọkàikpe ahụ ji ya n'eziokwu na onye ahụ na-akwado ya na-erekwa data ahụ.
Mgbe arụmụka ahụ ejirighị mmiri, onye ahụ a kwadoro kwukwara na ihe omume ndị ahụ na-emebi iwu nke Ngwakọta Ọrụ Ngwá Ọrụ (CFAA) n'ihi na mmalite malitere ịnweta sava ha iji weghachite data na-akwadoghị. Ọzọkwa, a kwadoro esemokwu ahụ. A jụrụ ya na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-ezigara ọha na eze, peeji ndị na-adịghị echebe.
Onye ikpe ahụ na-elele ikpe ahụ dịka mmadụ na-aga n'ime ụlọ ahịa na-emeghe n'oge awa azụmahịa. A pụghị ikwu onye dị otú a ka ọ bụrụ onye na-ezighị ezi. Ya mere, HiQ adighi-emejọ. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, onyeikpe ahụ gara n'ihu ịkọwa ihe mere mkpebi ya ji bụrụ maka mmasị ọha mmadụ.
N'okwu a, ụlọ ikpe ahụ kwetara na ọ bụ maka mmasị ọha mmadụ ka a na-atụgharị data, wepụtara, na nyochaa. Ya mere, ọ ga - abụ iwu na - emebi emebi iji kwado ntinye nke ihe mgbochi iji nweta ihe ọmụma.
Ihe ị kwesịrị ịmụta site na mkpebi
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnweghị ihe mere ị ga-eji wepụ data kpọmkwem na LinkedIn, ị ga-amụta site na mkpebi. Ọ ka mma iji egwu site n'ịgụ ma na-akwanyere ndị robots. txt faịlụ niile weebụsaịtị. Cheta na ochichi ahụ ka bụ ntụziaka na-adịru nwa oge. O nwere ike mechaa nweta ihu na LinkedIn.
Ọ bụ ezie na mkpebi ahụ nwere ike ọ gaghị emetụta gị ozugbo, ọ na-enwe obi ụtọ na ụlọikpe gọọmenti etiti na-akwado iwu nke ịdebe weebụ maka ọha na eze. Ya mere, ozi kwesịrị ịdị na ịnweta maka ndị nwere ike ịchọ ma jiri ya mee ihe nke ọma.
Data weebụ dị nnọọ uru nye onye ọ bụla, karịsịa ndị nyocha mgbasa ozi, ndị mmepe, ọkà mmụta sayensị na ndị ọkachamara ndị ọzọ. Dị ka ndị dị otú a, ikpe bụ mmepe na-akwado.